GUULDARADA GUUD IYO SOO SAARIDDA KHADKA SOO SAARKA GUDDIGA WAQTIGA AH （2）
Saddex, warpage 1. Warpage-ka waxaa loo qaybiyaa: jihooyinka jiifka ah ee jiifka ah, jihada kore ee sii jeedka ah, qulqulka kore ee kor u sii kacaya, qulqulaya dhererka dhaadheer, qallooca S-qaabeeya, qalloocinta laba-geesoodka ah 2. Khataraha ka dhalan kara warping: ① Ka dib markii mashiinka guddiga jiingado uu yahay jar, warqadu ma noqon karto otomaatig ...
GUULDARADA GUUD IYO SOO SAARIDDA KHADKA SOO SAARKA GUDDIDA
1. Adhesion liidata (xabagta furan, xabagta been abuurka ah) Waxqabadka waa: kadib marka lasocdo bilowga hore ee kartoonada mudo 5 daqiiqo ah, ficilka xoog dibadeed, gudaha, dusha sare ama aaladaha A, B ama sandwich-ka gabi ahaanba waa lakala saaray , iyo dhammaan fiilooyinka warqaddu waa dhawrsan yihiin, oo aan la seexin, iyo ...
Guuldarrooyinka guud iyo ka-hortagga qadka wax soo saarka guddiga jiingado
Aqoonta laxiriirta warshadaha ee mashiinada baakadaha kartoonka
Waraaqdu badanaa waxay ka samaysan tahay alwaax, saxarka bamboo, iyo cows ay ku jiraan maaddooyin kaladuwan oo fiber ah. Dhumucda warqadda ay soo saartay warshadda waraaqda, ama lagu dhisay warqad iyo kartoon. Laakiin qadka ma ahan mid adag. Guud ahaan marka laga hadlayo, culeyska salka ayaa ka yar 200 g / m ama ka yar dhumucdiisuna tahay 0.1 mm. Col ...
mashiinka samaynta sanduuqa jiingado / Single mashiinka wajiga
Mashiinka hal-dhinac ah wuxuu ka kooban yahay duub duudduuban iyo hal dhinac oo jiingado sameysmaya mashiinka. Marka hore, warqadda muhiimka ah ee jiingadda ayaa kululaaneysa, ka dibna duubka duuban ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qaabka jiingado loo baahan yahay. Ugu dambeyntiina, xabagta (xabagta istaarijku) ayaa lagu dhajiyaa jiingadda ugu sarreysa iyo combi ...
Sannado badan, tayada shirkaddayda awgood, Macaamiil badan ayaa doortay badeecadeenna, iyaga waxaa ka mid ah macaamiil ka socda Turkmenistan, Waxay iibsadeen 1800 nooc saddex kartoon jiingado ah, Waxaa la isticmaali jiray muddo saddex sano ah, Feedba Macaamiil. ..
Hayso koox xoog-iib ah kadib, qalab-ka-hagaajinta muddada-dheer iyo dayactirka waddanka oo idil
[Faahfaahin kooban) Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd. waxay ku taalaa koonfurta caasimada Beijing iyo waqooyiga Jinan. Waxay leedahay gaadiid biyo iyo dhul aad ugu habboon. Waa shirkad xirfadlayaal ah oo leh baaxad weyn oo soo saaridda mashiinnada kartoonka iyo pr ...
Farsamada | Tirinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee kartoonka luminta iyo tallaabooyinka horumarinta.
Luminta shirkadaha kartoonada ayaa ah qodobka ugu weyn ee saameeya qiimaha. Haddii luminta la xakameeyo, waxay kordhin kartaa waxtarka shirkadda illaa xad ballaaran waxayna hagaajin kartaa tartanka badeecadaha. Aynu falanqeyno khasaaraha kala duwan ee soo gaadhay warshadda kartoonka. Si fudud loo dhigo, t ...
Marka ay timaado kaarbood la’aan jiingado, dad badan ayaa ka fikiri doona kartoonka jiingada. Xaqiiqdii, ifafaalahaani lama mid aha rogaal celinta. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka baarto dhowr dhinac sida alaabta ceeriin, makiinadaha lebiska hal mar, biriijka, mashiinada dhajinta, suumanka wax lagu qaado, p ...